Dr.Farole oo tagay degmada Qardho
23 Nov 23, 2012 - 3:10:28 AM
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiraxman Shiikh Maxamed Farole ayaa maanta 23 November,2012 si weyn loogu soo dhoweeyey degmada Qardho xarunta gobolka Karkaar ka dib socdaal saaka waaberkii uga soo baxay Garowe.
Wasiiro iyo saraakiil madaxtoyada ka tirsan ayaa wehelinayey Madaxweynaha ,waxana uu ku hakadey Degmada Dangorayo oo banaanka la iskugu soo baxay imaatinka madaxweynaha iyadoona uu khudbad kooban ka jeediyey halkaasi.
Maamulka degmada Qardho ,odayaasha dhaqanka ,aqoonyahano haween iyo dhalinyaro ayaa Beerta Boqorka uga hortagay wafdiga madaxweynaha oo mid mid u gacan qaadey.
Wasiirka Amniga Puntland Col.Kahliif Ciise Mudan ,wasiirka deegaanka Cabdiqani Yuusuf Cadde iyo taliska ciidanka booliska Gen.Maxamed Siciid Jaqanaf ayaa qayb ka ahaa masuuliyiinta la socdey madaxweynaha oo ka soo jeeda gobolka.
Inkastoo madaxweynuhu saxaafada la hadlin markii uu Qardho tagay haddana waxa wasiirkiisa amnigu sheegey in dhowaanahan uu joogi doono magaalada isagoona kulamo iyo la-tashiyo la leh waxgaradka iyo odayashaa magaalada.
Garowe Online waxay idiin soo gudbineysaa sawiradda soo dhoweynta madaxweynaha Puntland ee Dangorayo ,Yako iyo magaalada Qardho ,waxana hadii eebe idmo kala socon doontaan booqashooyinka iyo kulamada Dr.Farole ee Qardho.